Sida loo qaato habeenkii arooska iyo meesha. Caadooyinka iyo xeerarka habeenkii arooska. Sida loo isticmaalo habeenkii arooska ugu horeeya
Xiriirka Wedding Caadooyinka Wedding iyo Rituals
Habeenka arooska ugu horeeya: caadooyinka iyo casriga
Qorsheynta habeenkii arooska waa in la siiyaa wax ka yar arooska. Iyadoo aan loo eegin sida aad u dhowayd, habeenkan ayaa weli ah habeenki ugu horeysa ee xaas ahaan. Waa in lagu xasuustaa noloshaada adigoo jacaylkaaga jacaylka ah, xargaha kulul iyo jilicsanaanta. Sidaa darteed, hubi inaad kala hadashid rabitaankaaga kala bar, u diyaari hadiyado wanaagsan, dabcan, ka taxadar in qofna uusan ku dhibin.
Sida loo qariyo habeenkii arooska
Si aad u bilawdo, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato meesha habeenkii arooska ee ugu horeeya. Waxaa jira fursado badan:
Gurigaada ama gurigaaga
Haddii aad doorato inaad leedahay hoygaaga ama isuduwid degaan ah ka dib arooska, ka dibna isku day in aad qolka hurdada u eegtid sida jacaylka ugu badan. Ha isla markiiba fasaxa si aad ugu laabato nolosha. Tufaaxyada sariirta sariirta, shumacyada, nalalka si habboon loo soo doortay. Dabcan, diyaariso dharka sariirta gaarka ah. Waxaad dooran kartaa xariir ama suuf jilicsan oo ah midabyo aan caadi ahayn, oo aan caadi ahayn noloshaada maalin kasta.
Qaboojiyaha, ku dheji dhalo shamac ah kahor aadna ka feker waxyaalaha fudud ee fudud. Waxay noqon doontaa mid culus oo wadajir ah si ay u qaataan qubays leh xumbo udgoon oo ku raaxeysta kuna hagaajineysa habka saxda ah. Waqtigaaga qaado, midba midka kale ha raaxaysto, daadinta farxada dareenka ah ee maalinta la soo dhaafay.
Shaki la'aan, qolka loogu talagalay dadka dhowaan yimid waa nooca ugu fiican ee habeenkii arooska ugu horeeya. Marka hore, qolka waxaa lagu qurxiyaa sida ay dhacdo. Marka labaad, waxaa lagaa ilaaliyaa dhibaatooyinka qoyska: uma baahnid inaad ka fikirto wax, marka laga reebo midba midka kale. Maxay noqon kartaa mid qurux badan ka dib maalin arooska walaac leh si aad u tagto qol qurux badan, cabto champagne iyo dharbaaxo xayawaanka. Iyo subaxdii amarka subaxdii ama si nadiif ah u tartamaya koob koob oo kafee ah.
Waa lagama maarmaan in la sii wado waxyaabaha soo socda:
dooro oo buug u qorto qol. Xalliyaan dhamaan su'aalaha warqadda si aanad ugu baahnayn in aad u istaagto dhinaca hawlgabka ama rush diyaarsan guriga ka dib baasaboorka inta ugu badan ee aan la helin;
fiiri liiska habeenkii. I rumee, waxaad hubaal ahaan dooneysaa inaad hesho cunto fudud. Iyo jikada hudheelka, oo aan shaqaynayn habeenkii, way kugu xanaaqi karaan;
ogow haddii qaabka qolka uu ku jiro qiimaha iyo, laga yaabo inuu, kala sheekeysto daaqada shaqaalaha.
Keli ah oo kaliya habeenkii arooska ee hotelka - waa kharash dheeraad ah. Laakiin, dhammaadka, qiimaha arooska, bixinta lambarka ma noqon doonto mid aad u culus.
Sidee ayaa habeenkii arooska ugu horeeya, haddii isla markiiba dabaaldega ka dib aad go'aansatay inaad tagto safar? Taasi waa sax, gaadiidka, haddii ay tahay diyaarad, tareen ama baabuur. Hadaad horey u soo qabanqaabisay wax walba, si sahlan u gudubka fasaxa ilaa malabku wuxuu noqon doonaa mid sahlan oo raaxo leh.
Dabcan, waa jahwareer in la sameeyo layaab la yaab leh oo bedelkeed halkii guriga loo geeyn lahaa ka dib arooska garoonka. Laakiin, xusuuso in gabadh kasta ay u baahan tahay dhar, qurxiyo iyo waxyaabo kale oo yaryar. Iyo xitaa haddii lacagtaadu kuu ogolaato inaad sidan oo dhan ku iibsato, ka feker sida ay ugu haboon tahay in la gashado dukaamada arooska. Sidaas daraadeed waxa fiican inaad u diyaarsato saaxibadaada ama hooyada qorshahaaga, si ay kuu caawiyaan inaad soo qaadato boorsada oo aad u diyaariso dharka xaaskaagu uu isbeddelayo.
Qorsheynta safarka isla markiiba ka dib arooska, ka fogow fursadaha la xidhiidha badan oo ku-tallaalidda iyo sugitaan dheer oo u dhaxeeya duulimaadka. Fasax ka dib, xitaa lamaanaha ugu farxada badan ayaa daalan. Iyo, laga yaabee, waxaa macquul ah in habeenkii la dhigo hudheel, oo tago safar maalinta xigta.
Waxa la sameeyo habeenkii arooska iyo meesha aad ku bixinayso, waxaad go'aansataa. Waxa ugu muhiimsan waa in shuruudaha saaxiibtinimo iyo wacyi galinta muhiimadda ay leedahay waxa dhacaya.
Dhaqannada aroosyada badan ee adduunka ayaa ah arooska aroosadda iyo arooska habeenkii arooska waxaa la socda caadooyin gaar ah. Ka hor intaadan martida ka soo bixin, aroosaddu waxay goysay bouquet. Sida laga soo xigtay calaamadaha, gabadha isaga soo qabta waxay noqon doontaa arooska xiga.
Waxa kale oo aad ka dhisi kartaa qariidad khafiif ah oo shukumaan ah, iyada oo dhalinyaradu ay tahay inay gudbaan, u tagaan nolosha guurka.
Xitaa haddii aadan ku xirneyn muxuu muhiim u yahay caadooyinka arooska, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in loo wareejiyo aroosadda marxaladda, haddii ay tahay guri dabaq ama qol marti ah.
Habeenka arooska ugu horeeya ee muslimiinta
Maxay tahay in la sameeyo habeenkii arooska, haddii uuraystayaashu yihiin Muslimiin, arooskuna wuxuu ku dhacaa si waafaqsan caadooyinka ku habboon? Si aad u bilawdo, ka hor intaan la isku soo dhoweyn, aroosadda iyo aroosku waa inay tukadaan oo waydiisataan Allaah inay u duceeyaan guurka. Salaadda waxaa si gooni ah u fuliya haweenka iyo ragga. Dabadeed arooska ayaa aroosadda uula dhaqmaa macmacaanka, laga yaabee in ay siiso macaan macaan.
Illaa iyo hadda, waxaa la aaminsan yahay in qaraabada laga filayo albaabka illaa uu ninkani muujiyo dhammaan xaashiyaha caddaynta dembiga lamaanaha. Si kastaba ha ahaatee, cibaadada noocan oo kale ah waxay ka hor imanaysaa dhaqanka Islaamka. Dhammaan wixii ka dambeeya, tilmaamaha ayaa sheegaya in aadan kufarsan karin dadka. Iyo sida loo raaxaysto, haddii ay aad ugu dhow yihiin dhalinyaradu waa odayaasha.
Inta kale, habeenkii arooska Muslimku wuu dhaafaa, sidoo kale wakiilada diimaha kale. Xaqiijinta, jilicsanaanta, raaxada, kor u qaadida dareenka kale - tani waa fure u ah isku xidhnaansho guuleysi ah ee lamaanaha cusub.
Sidaas awgeed, si habboon u habboon habeenkii arooska, waxaad u baahan doontaa inaad dooratid boos horay, u samee hadiyado yaryar iyo cajiib ah, samee dulqaad, gaar ahaan haddii tani tahay jinsigaaga koowaad iyo jacayl. Inta soo hartay ayaa raaci doona. Xasuuso in hareeraha bannaanka uusan uugu muhimsanayn sida dareenkaaga midba midka kale.
Dhaqanka arooska ee xiisaha leh ee dadka adduunka
Garter aroosadda, maxay tahay iyada?
Waa maxay caadooyinka xafladda arooska?
Hadiyadaha arooska loogu talagalay martida laga bilaabo dhowaan cusub
Taariikhda dharka, dharka arooska ee Russia
Nafaqa Wedding: dhaqanka iyo casriga
Ma iibsan karaa kijikasyada dukaanka internetka?
Kalluunku wuxuu ku tuntay suugo malab
Sida loo qurxiyo hoolka banaan
Kareemka leh mocha iyo cream cream
Shish kebabs ee maraqa iyo soy soy
Suugaan caksi ah iyo suulal casiir leh
Ukunta ukunta leh ee foornada
Biography Seeds of Farada
10 waxyaalaha aan ka baxsan fashion
Lisa Peskov kama qayb geli karo waxyaabihii hore
Rooti ee Adzimka (Adzimka)
Sidee looga takhalusi karaa ilkaha muddo 1 maalin ah
Hydromassage ka dhanka ah cellulite
Cimilada Moscow iyo gobolka Moscow ee July 2017 - ayaa saadaalisay Xarunta Hydrometeorological Center
6 Hababka fudud ee lagu xoojinayo xakamaynta
Alexander Panayotov: noloshii shaqsiyadeed ee ugu dambeysay ee 2017-nasiib-shakhsi ah - Is-guur ama xaas? Sawiro laga soo qaaday Instagram Panayotov
Singer Maxim, buugan sawir
Naagta ugu fiican ee raadinta ninkii dhamaystiran